जेठ २२, २०७७ | 4th June, 2020
ख्याल गर्नुहोस्, यस्तो बानीले गर्दा नपुसंक हुन सक्छ !
एजेन्सी, ख्याल गर्नुहोस्, यस्तो बानीले गर्दा नपुसंक हुन सक्छ !शरिरको तापक्रमको तुलनामा अण्डकोशको थैलीको तापक्रम करिब एक डिग्री कम हुन्छ । अण्डकोश थैलीको तापक्रम बढ्नाले स्पर्म काउन्ट कम हुन सक्छ । यसैगरी स्पर्म काउन्टमा तनावले पनि नकरात्मक असर पार्छ । यी कारणले गर्दा स्पर्म काउन्ट घट्न थाल्छ । तनावमा रहनु ल्यापटप काखमा राखेर काम गर्नु […]
कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न अपनाउनुपर्ने सावधानीहरु र टिप्सहरु
फागुन १९, काठमाडौं । कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न अपनाउनुपर्ने सावधानीहरु र टिप्सहरु । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले नेपाल कोरोना संक्रमणको अति उच्च जोखिममा रहेको जनाएसँगै कोरोना रोकथामको लागि सरकारले विभिन्न कदमहरु चालेको छ । विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएसँगै सचेतना अपनाउन आग्रह गरिएको छ । कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न अपनाउनुपर्ने सावधानीहरु र टिप्सहरु निम्न अनुसार छन् : […]
थाहा पाउनुहोस्, यौन जीवनमा पैसाले कसरी प्रभावित पार्छ ?
एजेन्सी । थाहा पाउनुहोस्, यौन जीवनमा पैसाले कसरी प्रभावित पार्छ ? अनुसन्धानकर्ताले पैसा वा प्रेम मध्ये एक रोज्न सल्लाह दिन्छन् । जीवनमा दुवैकुराको महत्वलाई ध्यान दिएर जीवनलाई सफल बनाउनु पर्नेमा अनुसन्धानकर्ताको जोड रहेको छ । पैसा कमाउने ध्यानले प्रेम जीवन समाप्त हुने र प्रेम जीवनको प्रभावमा पर्नेहरु पैसासँग टाढा हुने खालको समस्या विश्वव्यापी रहेको छ […]
स्वास्थ्यको लागि चमत्कारीक जडिबुटी पुनर्नवाका फाइदाहरु
नेपाली भू-भागमा पाइने हरेक जडिबुटी महत्वपूर्ण छन् तर यस्ता जडिबुटीप्रति कसैको चासो छैन यो दु:खको कुरा हो । हामीले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति चरम लापरबाही गर्दैछौं । मेरो बुबा वैद्य हुनुहुन्थ्यो हजुरबापछि बुबाले जडिबुटीबाट लाखौ व्यक्तिहरू निको बनाउनुभयो । बाबु जडिबुटी हाम्रो सम्पति हो यसलाई देशको विकासको रूपमा अघि सार्न सके नेपाली कोहि रोगी हुने छैनन् भन्नु […]
यस्तो छ, फङ्गल इन्फेक्सन हुनुका कारण र यसवाट पच्ने उपायहरु
एजेन्सी, गर्मीमा पसिना, वायुमा आर्द्रता बृद्धि अनि शरीर गुम्स्याउनाले फङ्गल इन्फेक्सन हुन्छ । यो एक प्रकारको ढुसी (फंगाई) को कारण हुन्छ । फंगल इन्फेक्सन हुँदा हात र खुट्टाको औँलाको बीचमा चिलाउने, रातो हुने र छाला उप्किएर छालामा टिकटिक सेतो छाला देखापर्ने, छालामा फोका उठ्ने, कपाल झरेर घाउ बन्ने लगायतका समस्या देखापर्छन् । गर्मी महिनामा पसिना […]
थाहा पाउनुहोस्, यस्तो छ महिलाहरुको धेरै टाउको दुख्नु कारण
एजेन्सी, पुरुषको तुलनामा महिलामा टाउको दुख्ने समस्या बढी हुने गरेको छ । बच्चा जन्माउनेलगायत महिलाले पाउने दोहोरो जिम्मेवारीका कारण या हर्मोनका कारण पनि उनीहरुको बढी टाउको दुख्ने हुन सक्छ । यति मात्रै नभएर टाउको दुख्ने अरु कारण पनि छन् । अक्सर टाउकोको कुन भाग दुखिरहेको छ, त्यहीअनुसार तपाईंको मनिस्थिति के छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ […]
यदि तपाईलाई राती सुत्ने बेलामा श्वास फेर्न अप्ठयारो हुन्छ भने यो रोगको लक्षण हो
एजेन्सी, दमको समस्या छ भने हरेक रात निदाउन निकै अप्ठयारो हुन्छ । अझै कतिपयमा त रातको समयमा दम बढ्ने हुन्छ । खोकी लाग्ने, श्वासप्रश्वासमा गह्रो हुने, हाच्छ्यू आउने, चिटचिट हुने हुन्छ । यो समस्याको छिट्टै नै उपचार गर्नुपर्छ । सुत्ने तरीका ठिक नहुँदा हामी सुतेको बेला हावाको वहाव तल्लो तहबाट हुन्छ भने फोक्सोमा रगतको प्रभाव […]
यस्तो छ नाकको एलर्जीका लक्षण र जोगिने उपायहरु
एजेन्सी, वातावरणीय प्रदुषणका कारण श्वासप्रश्वासजन्य समस्याबाट शहरी क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरू बढी पीडित भइरहेका छन् । शरीरका जुनसुकै अंगमा एलर्जी हुने क्रम बढ्दो छ । प्रदुषणका कारण सबै भन्दा बढी नाकमा एलर्जी हुनसक्छ । नाकको एलर्जीलाई बेवास्ता गरे यसले दम रोग समेत निन्त्याउन सक्छ । नाक बन्द हुने, स्वाँ स्वाँ बढी हुने, पतलो सिंगान बग्ने, हाँछ्यू […]
हाम्रो मुटुलाई स्वस्थ राख्ने उपायहरु
स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने भनाइ छ । त्यस्तैगरी हामीले पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्नको लागि धेरै कुराहरु ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । किन की स्वस्थकर जीबन जिउनको लागि त्यति सजिलो छैन । हामीले हरेक कुराहरुको ख्याल गर्नुपर्छ र खानेकुराहरुमा पनि विशेष ध्यान दिन जरुरि छ । मुटुलाई स्वस्थ राख्ने उपायहरु व्यायाम तथा खेलकुदमा सक्रिय हुने […]
यस्ता कारणले टुट्न सक्छ सम्बन्ध
एजेन्सी, सम्बन्ध गाँसिएपछि टुट्न नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । व्यस्त जीवनशैली स्वस्थ रुपमा व्यस्त रहनु राम्रो कुरा हो तर कहिलेकाही त्यही व्यस्तता तपाईको लागि बैवाहकि सम्बन्धमा नराम्रो पनि बन्न सक्छ । आफ्नो कामलाई प्राथमिकता दिने तर सम्बन्धलाई धेरै ख्याल नगर्दा सम्बन्ध टुट्न सक्छ । नयाँ ठाउँ नयाँ ठाउँमा आफ्नो पार्टनरलाई नलानले पनि […]
चिसो मौसममा बदाम खाँदा हाम्रो स्वास्थ्यमा हुने फाइदाहरु
चिसो मौसममा घाममा बसेर बदाम खानुको आफ्नै मज्जा छ । यो स्वास्थ्यका लागि पनि निकै फाइदाजनक छ । बदाममा स्वास्थ्यको खजाना लुकेको छ । यसमा पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ जुन शरिरको वृद्धिका लागि निकै आवश्यक हुन्छ । यदि तपाईं कुनै कारणवश दुध पिउन सक्नुहुन्न भने विश्वास गर्नुहोस् बदामको सेवन एक उत्कृष्ट विकल्प हो । फाइदाहरु […]
होम्योपैथीक औषधिबाट ग्यास्ट्रिकको उपचार
आज हरेक नेपाली २ जनामध्ये एकजनालाई ग्यास्ट्रिक भएको हुन्छ । पेट दुख्ने, पोल्ने, अम्लपित्त बढ्ने आदि लक्षणयुक्त समस्यालाई नै ग्यास्ट्रिक भन्ने गरिन्छ । जब पेट खाली हुन्छ तब त्यहाँ हावा भरिन थाल्दछ । पेट भरेर होइन थोरै थोरै खाने पिरो अमिलो नखाने गरेमा ग्यास्ट्रिक आफै निको हुन सक्छ भनेको छ । ग्यास्ट्रिक भएकाहरुलाई वाकवाकी लाग्ने, […]
नुन बढी खानु स्वास्थ्यका लागि कति हानिकारक छ ?
नुन हाम्रो लागी आवश्यक बस्तुमध्ये एक पर्दछ । तर यहि वस्तुको सेवन बढी गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । नुनले शरीरमा सोडियमको मात्रा कायम राख्छ । मांसपेशी, तन्त्रिका, तरल पदार्थ आदिलाई सन्तुलनमा राख्न पनि नुनमा पाइने तत्वले विशेष भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । तर, अत्यधिक नुन खाएमा त्यसले शरीरमा नकारात्मक असर पार्छ भन्ने बुझ्न […]
गाईको घिउबाट गरिने रोगको उपचार
स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले गाईको घिउ सवैभन्दा पौष्टिक मानिन्छ । घिउ खाँदा कब्जित हटाउछ । गाईको घिउमा कोलेस्ट्रोल हुँदैन, जसबाट मोटोपन बढ्ने समस्या रहँदैन । घिउमा Conjugated Linoleic Acid पाइने हुनाले वजन कम गर्नका लागि गाइको घिउ प्रभावकारी मानिन्छ । नियमित गाइको घिउ सेवनले वजन बढाउँदैन बरु कम गर्छ । त्यस्तै गाईको घिउ खादा मुटुलाइ निकै फाइदा […]
घ्युकुमारीको प्रयोगबाट हुने फाइदाहरु
घ्युकुमारीलाई अंग्रेजीमा एलोभेरा भन्दछन् । यो गमलामा लगाउन सकिने खालको जडिबुटी अन्तर्गत पर्दछ । हाम्रो घरमा यो सधै गमलामा रोपेको हुन्छ । हाम्रो शरीरलाई चाहिने आवश्यक तत्व घिउकुमारीको सेवन गर्नाले पाउन सकिन्छ । आज मैले यसै घिउकुमारीको विषयमा पाठकलाई मिठो जानकारी पस्कने जमर्को गर्दैछु । घिउकुमारी नचिन्ने सायद को होला ? घिउकुमारी मानव स्वास्थ्यमा सदियौंदेखि […]
मधुमेह भयो भने के गर्ने त ? थाहा पाउनुहोस्
मधुमेह भएका साना बच्चाका आमाबुबाहरु उनीहरुको बच्चाको मधुमेहको व्यवस्थापनमा धेरै नै संलग्न भएका हुन्छन् । जब बच्चा ठूलो हँदै जान्छ उनीहरुलाई मधुमेहको व्यवस्थापन गर्ने आत्मविश्वास र तरिकाहरु सिक्न आवश्यक छ । बच्चा वा किशोरकिशोरीलाई मधुमेह व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भर बनाउन आमाबुबाहरुलाई धेरै गाह्रो हुन्छ । आमाबुबाहरु आफ्नो बच्चाको विषयमा धेरै नै चिन्तित हुन्छन र आफ्नो बच्चाले त्यस्तो […]
मधुमेह रोग भएकाहरुले खान हुने खानेकुराहरु
खस्रोपना भएका रेशायुक्त खानाहरु: उसिना चामल, मिलमा नपिनीएको चामल, ब्राउन राइस, मकैको पिठो, गहुँको पिठो, कादोको पिठो, फपरको पिठो आदी पर्छन्। कार्बोहाइड्रेटयुक्त खाना जस्तै: भात, आलु कम खाने । चिल्लो वा बासो नभएको मासु खाने तर रातो मासु धेरै नखाने । अण्डा र ताजा माछा ठिक्क मात्रामा खाने । पर्याप्त ताजा सागसब्जी, बन्दा, काउली, काक्रो, […]
मधुमेह भएका मानिसले खान नहुने खानेकुराहरु
माछा मासु, अण्डा, दूध दही पनि खान नहुने भन्ने होइन। यिनमा प्रोटिनको मात्रा प्रशस्त हुन्छ र शरीरको वृद्धि विकास, मर्मत सम्भारको लागि यो आवश्यक हुन्छ। त्यसैले चिल्लो कम भएका प्रोटिनयुक्त खानाहरु आवश्यक मात्रामा खान जरुरी हुन्छ। मधुमेहका कारणले मृगौलामा समस्या देखापरेमा भने चिकित्सकको सल्लाहमा प्रोटिनयुक्त खानाको मात्रा घटाउनुपर्ने हुनसक्छ। मधुमेह रोगमा निम्न प्रकारका खानेकुराहरु खानु […]
मधुमेह भए नभएको जानकारी अब पसिनावाट
वैज्ञानिकहरूले हाम्रो शरीरको पसिनासहितको छालाको विश्लेषणबाट ब्लड सुगर (मधुमेह) को मात्रा पत्ता लगाउने सेन्सर विकास गरेका छन् । ब्लड सुगरको मात्रा पत्ता लगाउन थोरै पसिना भए पुग्छ । दक्षिण कोरियाली वैज्ञानिकको एउटा समूहले ब्लड सुगरको मात्रा पत्ता लगाउन सेन्सर प्रभावकारी भएको प्रमाणित गरेका हुन् । यसबाट मधुमेह पीडितलाई सहयोग पुग्ने वैज्ञानिकहरुको विश्वास छ । यो […]
चुरोट भन्दा पनि अगरबत्तीको धुँवा खतरानाक !
एजेन्सी, अगर बत्तिको धुवा चुरोटको भन्दा स्वास्थयकालागि हानिकारक रहेको पाइएको छ । चिनमा गरेको एक अध्ययन अनुसार अगरबत्ती बाल्दा त्यसको धूँवासँगै मसिना कणहरू निस्केर हावामा घोलिन्छन् । जुन चुरोटको भन्दा बढी हानिकारक हुन्छन । त्यस्तो अगरबत्तीबाट विषालु कण निस्कन्छन् र शरीरका कोशिकालाई हानि गर्छन । अध्ययन अनुसार अगरबत्तीमा तीनवटा विषालु तत्त्व हुन्छन् ।स्म्युटाजेनिक, जीनोटक्सिक र […]